တားဆေးသုံးတာ နှစ်ပေါက်နေရင်ရော ကလေး မရနိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်လား? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တားဆေးသုံးတာ နှစ်ပေါက်နေရင်ရော ကလေး မရနိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်လား?
တားဆေးတွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ သုံးခဲ့သုံးခဲ့ ကလေး ရနိုင်ခြေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ တားဆေးရပ်ပြီ3းလအတွင်း ပြန်လည်သားဥကြွေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်များက ကလေးယူဖို့အစီအစဉ် ရှိသူတွေကို တားဆေ3းလ ကြိုဖြတ်စေပြီး ကလေးမယူခင်စပ်ကြားမှာ ကွန်ဒုံးသုံးခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါမှသာ ရာသီစက်ဝန်း ပြန်မှန်လာပြီး ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့အခါမှာလည်း ကလေးမွေးမယ့်ရက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ချင်း ကလေးယူချင်သူတွေမှာလည်း ပုံမမှန်သွေးဆင်းမှု မဖြစ်စေရန် လတ်တလော သောက်နေတဲ့ ဆေးကတ်ကိုတော့ ကုန်အောင် သောက်စေလိုပါတယ်။
သားဥအိမ်မှာ အရည်အိတ် ရှိနေသလား?
၂၁.၇.၂၀၁၈ | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သားဥအိမ်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျိုးပွားမှုအတွက် အထူးပင် အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေတော့လည်း သားဥအိမ်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
သားဥအိမ်ဟာ လတိုင်း သားဥကလေးကို အရည်အိတ်လေးထဲ ပေါက်ထွက်ချိန်တန်သည့်တိုင်အောင် ထွေ...
၁၇.၇.၂၀၁၈ | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
♦ ဘရာစီယာ အတွင်းခံဝတ်ခြင်းက ရင်သားကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား?
♦ ရင်သားကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းအရင်းတွေက ဘာတွေပါလဲ?
လတ်တလော စာတမ်းပြုစုထားတဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ ဘရာအတွင်းခံနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ဆက်နွယ်မှု မရှိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။